Manao hosodoko ihany koa izy. Niboiboika ny aingam-panahiny nandritra ny fihibohana ary efa nahavita tabilao maromaro izy amin'izao. Tabilao izay mirakitra sary sy loko, harafiny manaraka ny aingam-panahiny. Ho avy ny Fetin'ny Reny, fotoana omeny lanja manokana isan-taona ka hiroso amina varotra fampirantiana ireo sangan'asany izy. Hanomboka ny sabotsy izao ity varotra fampirantiana ity ka eny amin'ny PAPER STORE, ao amin'ny Centre Commercial Akoor Digue Andohatapaneka no hanatanterahany izany, mandritra ny 2 herinandro. Marihina fa efa hatramin'izay i Bodo no nanao hosodoko saingy ny fihirana no tena nifantohany.